मान्छेले बाँचेको आजको परिवेश - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
रमेश उप्रेती || 30 April, 2022
हामी गजबका प्राणी हौँ । भोक मेटाउन अन्नको खेतीपाती थाल्यौँ । कपडाका लागि कपासको धागोबाट कपडा बुन्यौ । रोगका निदानका लागि जडीबुटी खोजी गर्यौं । जिवन र जगतको भौतिक संसार चलाउन काविलाको नायक बनायौँ । त्यसपछि गणको नायक बनायौँ । गणको नायकहरूमध्ये कसैलाई राजा बनायौँ । राष्ट्रपति प्रणालीमा आयौँ । फेरि के–के आउँछ थाहा छैन । सिर्फ मान्छेका हितका लागि र शक्तिशाली हुँदै गयौँ । हामीमा क्रोध पलायो, ईर्ष्या पलायो, सधैँ नायक हुने जिजीविषा ले घर गर्यो हाम्रै चिन्तनबाट ।
विभिन्न कालखण्डमा कसैले वैराग्य जन्माए, कसैले धर्म भिरू जन्माए, कसैले चक्रवर्ती राजा जन्माए । यिनै परिवेशको द्वन्द्वात्मक संसारमा स्वार्थपरताको खेतीपाती गर्यौं । त्यो बेलादेखि आजसम्म र भोलि पनि मान्छेमा हरेक प्रकारका भावनाहरू रहे र रहनेछन् । प्रत्येक मान्छेको राय विचार, सुझाव अलग अलग छ । अनेकताको बीचमा एकता पनि खोज्दै गयौँ । संसारमा बाँचुञ्चेलसम्म यही संसारमा, यिनै परिवेशमा रहनुपर्छ । संसार राम्रो र नराम्रो दुवैको पूर्ण योग छ ।
मान्छेका जातिका लागि मान्छेले मान्छेविरूद्ध संघर्ष गर्यो । हामी वर्गमा बाँडियौँ । धनी र गरिब भयौँ पृथ्वीकै खजनाका कारणबाट जातिमा बाँडियौँ, धर्ममा बाँडियौँ, नश्लमा बाँडियाैँ । यो द्वन्द्वात्मक दुनियाँमा रूखो, भोल्टेयर, माक्र्स, गान्धी, माओ, लेनिन, जंगबहादुर, भिमसेन थापा, मानदेव, पृथ्वीनारायण, बिपी, पुष्पलाल, महेन्द्र आदि शंकराचार्य, बुद्ध, जिसस, मोहम्मद आफ्ना आफ्ना भूगोलमा जन्मे । मान्छेका लागि, जातिका लागि, वर्गसंघर्षका लागि, शान्तिका लागि, धर्मका लागि, राजनीतिका लागि, स्वतन्त्रताका लागि आ–आफ्ना विचार दिए ।
विचारहरूले झुण्ड तयार गर्यो, विचारहरू उम्लिन थाले, त्यसमा अनेक प्रकारका बुलबुले उठे । को सत्य, को असत्य छुट्याउन गाह्रो भो । सजिलो झुण्डमा सदस्यता लिई त्यसैलाई जिन्दावाद भन्दा सोच्ने, सम्झने टन्टा साफको दिशातिर हामी उन्मुख हुँदै गएका छौँ । मंगल ग्रहमा बस्तीका लागि प्रयत्नशील मान्छ त्यो पनि आफ्नो भूगोल, समुदाय, जाति, धर्म र नश्लका लाग, आम मानिस साँघुरिँदै गयो । बम, रकेट, मिसाइल, हातहतियार आम मान्छेको सुरक्षाको होइन मानिसहरूले खिचेको सीमा रेखा र त्यो सीमारेखाभित्र बस्ने मान्छेका सुरक्षाको नाममा भएको वितण्डा र घातका श्र्रष्टा पनि हामी नै भयाँैं । कोरा आदर्शको लागि यो बथानमा म कहाँ छु भनेर हेर्दा मेरो धरातल नै भेटिनँ ।
मान्छे हो स्वतन्त्ररूपमा सोच्न सक्छ । जति स्वतन्त्र भने पनि यो परिवेश, हिजोको परिवेशको गन्ध, सुगन्ध, दुर्गन्धबाट मुक्त भई नयाँ विचार जन्मनै सकेको छैन । म पनि यिनै परिस्थितिको एक मिसिमको दास हँु । भौतिक दास र मानसिक दासको दुवैका रसायनहरू नस नसमा घुसेका छन् । सेतो वस्त्र लगाएको पादरी देख्दा बम र मिसायलको त्रास लाग्छ । दाह्री पालेको मुल्ला देख्दा आफ्नो हलाल भएको सपना देख्छु । पहेँलो वस्त्र लगाएको भिक्षु र संन्यासी देख्दा मानसिक दासको जग निर्माण भएको देख्छु ।
यो मेरो भ्रम होला । पार्टी देख्दा स्वार्थी झुण्ड लाग्छ, नेता देख्दा सपनाको ठग जादुगर लाग्छ । राजनीति अवयवहरू र आयाम देख्दा कोलाहल र संन्त्रास लाग्छ । यो सोच र चिन्तन ममा आउनका लाग म मात्र जिम्मेवार छैन यो वर्तमानको द्वन्द्वात्मक संसारको सम्पूर्ण घटना, परिघटना पनि जिम्मेवार होला । संसार दुःखमय छ भने निराशा र शून्यवादको विरूद्ध शंकराचार्यको अद्वैतवाद पनि एक अर्काका लागि निषेधका लागि जन्मेका विचार हुन भन्ने अर्को त्यस्तो विचारले पनि प्रभाव पारेको होला, जीवनको चक्रमा अहिलेको वर्तमानमा राजनीति र त्यसका दर्शन, दर्शन बेच्दै सुदखोर जस्ता नेतृत्वले ज्यादै हलचल र प्रभाव पारेको छ ।
साम्यवादी दर्शन जनताको लागि रे, प्रजातन्त्रवादी दर्शन जनताको लागि रे, समाजवादी दर्शन जनताको लागि, अनेकौँ राजनीति दर्शन जनताका लागि रे ? प्रत्येक राजनीति दर्शन पछि प्राप्ति राजनीतिक प्रणालीमा जनताकै नाममा युद्ध, उन्माद, लुटखरौट, आमकेन्द्रित, व्यापारवाद किन जन्माउँछन् दर्शनका अनुयायी नेतृत्वहरूले ।
सम्पत्तिमा औसतरूपमा प्रणालीका लागि संघर्ष गरी विजय प्राप्त गरी नेतृत्व लिनेहरू वर्तमानका भन्दा खराब थिएनन् । हिजोको जनहितको संघर्षका लागि चाहे प्रकृतिसँग, चाहे राजनीतिक प्रणालीसँग लडार्इं लड्नेहरूलाई सलाम नगर्ने हो भने इतिहास र मानव समाजको विकासलाई अपमान गरेको ठहरिन्छ जस्तो लाग्छ । तर, पनि तितो यथार्थ सही राजनीतिक पार्टी र दल छन् त हामी बनेको भेडतन्त्रमा ? सही साधु सन्त, मुल्ला, पादरी, भिक्षु छन् त मन्दिर, विहार, मस्जिद, चर्चमा ? धार्मिक कट्टरता र पैसामुखी आजको अवस्थामा धर्मको परिभाषा समायनुकूल भेटिन्छन् भन्ने आस नै लाग्दैन । विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश, देवीको आराधना गर्ने र सिद्धार्थ गौतमप्रति गर्व गर्ने मेरो परम्परागत संस्कारभित्र मैले खोज्ने र उदाहरण दिने पनि यिनै परिवेशकै उपजलाई मात्र हो ।
भौतिक जगतमा अपवादमा राम्रा मानिसहरू जोगी, सन्त, भिक्षु, पादरी, मौलाना होलान् ती छोपिएका छन् । त्यसैगरी, जनहितमा काम गर्ने राजनीतिज्ञ होलान् भेडतन्त्रले, नेतृत्वले, लखटेर छापामा बसेका होलान् । दाह्री, जटा, दण्ड, कमण्डलु, जयमाला र मृगचर्म या दिगम्बरको स्वरूप गर्दै साम्राज्यको लागि तृष्णा पालेका पनि उत्तिकै छन् । साधुको भेष र नेताको भाषण वाहरी आवरण मात्र हो । भन्ने ठहर गर्न नसके पनि अर्धसत्य हो ।
साधुको नसा नसामा, मनमा, तनमा आध्यात्मिकता भरिएको र जनताको लागि जनता मै जनताको सेवा गर्ने राजनीतिक सोच, चिन्तन त्यहीअनुरूपको व्यवहारको कल्पना मुंगेरीलालाको सपना मायाको भौतिक संसारमा रूमल्लिइरहेको छ । म अथकरूपमा खोजीकै क्रममा छु । हेरौँ प्राप्ति कस्तो हुन्छ ।